၆.၄.၂၀၁၉ – TKBC Bible
1 ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ခိုလှုံရာဖြစ်၍၊ ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ ဘေးရောက်သည်ကာလ အထူးသဖြင့် ကူမတော်မူကြောင်း ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။2ထိုကြောင့် ပထဝီမြေကြီးသည်ရွေ့သွား၍ တောင်များတုန်လှုပ်လျက် သမုဒ္ဒရာသို့ကျသော်လည်း၊ ငါတို့သည် ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိ။3သမုဒ္ဒရာရေသည် ဟုန်းဟုန်းမြည်၍ မွှေနှောက်ပါလေစေ။ လှိုင်းတံပိုးထသဖြင့်၊ တောင်များတုန်လှုပ်ပါလေစေ။4မြစ်တစ်မြစ်ရှိသေး၏။ ထိုမြစ်ရေသည်စီး၍ ဘုရားသခင်၏ မြို့တည်းဟူသော အမြင့်ဆုံးသောဘုရား ကျိန်းဝပ်တော်မူရာ သန့်ရှင်းသောမြို့တော်ကို ရွှင်လန်းစေတတ်၏။5ထိုမြို့သည် ဘုရားသခင်ကျိန်းဝပ်တော်မူရာဖြစ်၍ တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိရာ။ မိုးသောက်လင်းစ၌ ဘုရားသခင် ကူမတော်မူလိမ့်မည်။
6 လူမျိုးတို့သည် ဟုန်းဟုန်းမြည်ကြ၏။ တိုင်းနိုင်ငံတို့သည် လှုပ်ရှားကြ၏။ ဗျာဒိတ်သံကို လွှတ်တော်မူ၍ မြေကြီးသည် အရည်ဖြစ်လေ၏။7ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ ယာကုပ်အမျိုး၏ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ ခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏။ 8 ထာဝရဘုရားစီရင်ပြုပြင်၍ မြေကြီးပေါ်မှာ သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းအမှုတော်များကို လာ၍ကြည့်ရှုကြလော့။9လေးကိုချိုးလျက်၊ လှံကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်လျက်၊ ရထားကိုမီးရှို့လျက်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် စစ်မှုကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏။ 10 ငြိမ်ဝပ်လျက်နေကြလော့။ ငါကား ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟု သိမှတ်ကြလော့။ လူမျိုးတို့တွင် ငါသည် ဘုန်းပွင့်မည်။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဘုန်းပွင့်မည်။ 11 ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။ ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏။
1 ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်,ဒီးပဂံၢ်ပဘါလီၤ. လၢတၢ် မၤကိၢ်မၤဂီၤန့ၣ် ပှၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ ဒၣ်တၢ်လီၤ.2မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်လဲလိာ်အလီၢ် ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢၢ်ကလိမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်စိာ်အီၤဆူပီၣ်လဲၣ် အသးကံၢ်ပူၤဘၣ်ဆၣ်,3အထံတဖၣ်မ့ၢ်သီၣ်ထီၣ်ရုၢ်ရုၢ် ဒီးသဘှဲထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢၢ်ကလိဆှဲးဆှိးလၢအလ ပီဒိၣ်အဃိဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ပတပျံၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်. စ့လၤ.
4 ထံမိၢ်ပှၢ်အထံဖးဒ့တဖၣ်န့ၣ်ဒုးသးခုယွၤအဝ့ၢ်, တၢ် ထီၣ်ထီတဂၤအအိၣ်အဆိးအလီၢ်စီဆှံလီၤ.5ယွၤအိၣ် ဝဲလၢအသးကံၢ်ပူၤလီၤ. တဟူးတဝးဘၣ်. လၢမုၢ်ဆ့ၣ် ဝါထီၣ်န့ၣ်ယွၤကမၤစၢၤအီၤလီၤ.6ပှၤကလုာ်တဖၣ်အ သီၣ်ထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်, ဘီမုၢ်တဖၣ်ဟူးဝးဝဲလီၤ. အဝဲဒၣ်ဒုး သီၣ်လီၤအကလုၢ်, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ပှံၢ်ဝဲလီၤ.
7 တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ, စီၤယၤကိာ်အက စၢ်မ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်လီၤ. စ့လၤ.
8 ဟဲကွၢ်ယွၤအမၤတၢ်တဖၣ်, လၢအပာ်လီၤတၢ်အိၣ် သယုၢ်တဖၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်တက့ၢ်.9ဒုးအိၣ်က တီၢ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ် တုၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ် လီၤ. မၤကၢ်ချံၣ်ဧိၤပျၢ်ဧိၤ, ဒီးဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်ဘီဧိၤနးဧိၤ, ဒီးဆူးကွံာ်လ့ၣ်ကဟၣ်လၢမ့ၣ်အူလီၤ. 10 အိၣ်ဃိကလာ်, ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ်. ယကအိၣ်ထီၣ်ထီလၢ ပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, ယကအိၣ်ထီၣ်ထီလၢဟီၣ်ခိၣ် ချၢလီၤ.
11 တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ, စီၤယၤကိာ်အက စၢ်မ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်လီၤ. စ့လၤ.